AHOANA NO FOMBA HANAMBOARANA FITAOVANA USB EO AMIN'NY TOETR'ANDRO AMIN'IZAO FOTOANA IZAO REHEFA VOAMARINA NY SOLOSAINA - FOR BEGINNERS - 2019
Tena For beginners
Ahoana no fomba hanamboarana fitaovana USB eo amin'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao rehefa voamarina ny solosaina
Raha aorian'ny famoahana ny ordinateranao irery, dia hahita hafatra diso momba ny efijery ianao. Ny fitaovana USB dia mihoatra ny 15 segondra, midika izany fa misy ny olana amin'ny USB (ny fiarovana amin'ny ankapobeny) Na izany aza, ny mpisera vaovao dia tsy afaka manavaka mandrakariva ny zava-dratsy sy ny fomba hamahana ilay olana.
Ao anatin'ity boky ity dia hianatra fomba tsotra hanitsiana ny rindrambaikon'ny USB momba ny toe-javatra misy ankehitriny ianao ary avy eo manakatona ny ordinatera.
Easy fix method
Manomboka amin'ny antony mahazatra sy ny mora indrindra ho an'ny mpampiasa vaovao mba hamahana ilay olana. Mety tsara raha miseho tampoka ilay olana, tsy misy hetsika eo amin'ny anjaranao: tsy aorian'ny nanovanao ny raharaha, na nanongana ny PC ary nanadio izany tamin'ny vovoka na zavatra toy izany.
Noho izany, raha sendra diso ny fitaovana USB USB momba ny toe-javatra misy ankehitriny, matetika (fa tsy foana) matetika dia midina mankany amin'ireto manaraka ireto
Ny olana amin'ny fampiasana fitaovana USB dia matetika ny olana.
Raha toa ianao ka nampifandray fitaovana vaovao ho an'ny USB, vao tapitra ny rano, dia nametraka toto USB na zavatra mitovy amin'izany, andramo ny fandefasana ireo fitaovana rehetra ireo.
Ataovy ao an-tsaina fa ny tranga rehetra dia mety amin'ny iray amin'ireo fitaovana USB mifandray (anisan'izany ny totozy sy ny klavier voatonona, na dia tsy nisy zava-nitranga taminy aza, tao amin'ny USB fanovozana ary na dia cable tsotra, mpanonta printy, sns.).
Andramo ny manapaka ny fitaovana rehetra tsy ilaina (ary tena ilaina - ary ilaina) avy amin'ny USB miaraka amin'ny solosaina nesorina.
Hamarino raha hita fa misy ny fitaovana USB mitondra ny toerana misy azy ankehitriny.
Raha tsy misy hadisoana (na ovaina ho an'ny hafa, ohatra, momba ny tsy fisian'ny klavier), andramo ny mampifandray ireo fitaovana amin'ny fotoana iray (manafoana ny solosaina eo anelanelany) mba hamantarana ny olana.
Vokatr'izany, aorian'ny famantarana ny fitaovana USB izay miteraka ny olana, aza mampiasa azy (na manolo izany raha ilaina).
Ny tranga iray tsotra nefa tsy fahita firy dia raha vao nafindra ny rafitra fanehoana an-tserasera ianao dia ataovy izay tsy hikasika zavatra metaly (radiateur, cable antenna, sns).
Raha ireo fomba tsotra ireo dia tsy nanampy ny hiatrika ilay olana, dia mandehana amin'ny safidy maro kokoa.
Antony fanampiny momba ilay hafatra "USB fitaovana eo amin'ny toeran'ny ankehitriny no ahitan'ny rafitra aorian'ny 15 segondra" ary ahoana no hanafoanana azy ireo
Ny antony mahazatra manaraka dia ny USB Connector. Raha matetika mampiasa karazana connecteur USB ianao, ohatra, mampifanaraka sy mampidina USB flash flash isan'andro (ireo mpampiasa eo amin'ny tontonana eo amin'ny solosaina matetika no mijaly) dia mety miteraka olana koa izany.
Na dia amin'ny toe-javatra rehetra aza dia tsara ny mifandray amin'ny connecteurs ary tsy mampiasa ny connecter aloha ianao, mamporisika ny miala amin'ny môtô aho, matetika dia manampy azy io. Raha te hanafoanana, atsaharo ny ordinatera, anisan'izany ny tambajotra, sokafy ny raharaha, ary afindrao ireo telegrama mitarika mankany amin'ny solosaina USB.
Raha mila fanazavana momba ny fomba fijerin'izy ireo sy ny fomba amaizana azy ireo dia jereo ny torolàlana momba ny fomba fampifandraisana ny connecteurs amin'ny rindrina eo anoloana eo amin'ny rindrina ao amin'ny fizarana "Mampifandray USB port eo amin'ny tontonana eo aloha".
Indraindray ny fitaovana USB ahitàna ny toerana misy amin'izao fotoana izao dia mety ho vokatry ny USB jumper (jumper), izay matetika no nanao sonia USB_PWR, USB POWER na USBPWR (mety ho mihoatra ny iray, ohatra, ny iray ho an'ny connectors USB aoriana, ohatra USBPWR_F, iray - ho an'ny front - USBPWR_R), indrindra raha vao nahavita asa sasantsasany tao amin'ny solosaina ianao.
Andramo ny hahita ireto jiro ireto eo amin'ny môtera (eo akaikin'ny connecter USB izay ampiasain'ny tontonana aloha ny dingana teo aloha) ary apetraho izy ireo mba hahafahan'izy ireo mifandray 1 sy 2, fa tsy 2 sy 3 (ary raha tsy tanteraka izy ireo ary tsy napetraka - mametraka azy ireo an-toerana).
Raha ny marina, ireny dia fomba rehetra izay miasa amin'ny tranga tsotra fotsiny. Mampalahelo fa indraindray ny olana dia mety ho sarotra kokoa sy sarotra kokoa amin'ny fanitsiana ny tenany:
Fiatrehana ireo singa elektronika ao amin'ny solaitrabe (noho ny diplaoma, ny tsy fahombiazan'ny fisarahana, na ny tsy fahombiazan'ny fotoana).
Fiatrehana ireo connecteurs USB amboarina (mila fanamboarana).
Mahalana - tsy mety ny fiasan'ny solosaina.
Anisan'ireo torohevitra hafa ao amin'ny Internet momba ity olana ity, dia afaka mahita ny famerenana BIOS ianao, saingy raha ny fampiharana azy dia tsy mahomby raha toa ka mahomby (raha tsy nanao fampandrenesana BIOS / UEFI ianao talohan'ilay diso).
https://termotools.com mg.termotools.com © For beginners 2019